Sabriye Soomaali, Author at Jubbaland TV
Home Articles posted by Sabriye Soomaali
Sabriye Soomaali June 12, 2018 0
Jasiiradda Sentosa ee Dalka Singapore, waxaa ka bilowday Shirka u dhaxeeya Madaxweynaha Mareykanka Donald Trum iyo Hogaamiyaha Kuuriyadda Waqooyi Kim Jong-un, iyada oo labada Hoggaamiye ay is gacan qaadeen. Shirkan oo ah kii ugu horeeyay oo ay labada dhinac yeesheen ayaa waxa ay kaga wada hadli
Wafdi uu hoggaaminayo Taliyaha howl-galinta ciidanka xoogga dalka General Maxamed Sheekh Madoowe ayaa booqday Deegaanada Jubboyinka ee dhawaan laga xureeyay Maleyshiyada Nabadiidka Al-shabaab Saraakiisha Ciidanka Xoogga dalka ayaa booqday deegaanada kala ah Baar-sanguuni,kaban iyo Tuulo hoos tagta Degmada jamaame, iyagoona u kuur galay Amniga deegaanadaasi. Taliyaha qeybta
Sabriye Soomaali May 31, 2018 0
Mas’uuliyiinta dlka Algerian ayaa gacanta ku dhigay in ka badan 700 kg oo ah maandooriyaha loo yaqaanno cocaine ,isla markaana ku jiray container saaran markab yar oo marayey biyaha badda ee dalkaasi. Mukhaadaraadkaasi ayaa lagu qiyaasay in uu u dhigmo 1,543 bilyan,iyadoo dad gaaraya 20-ruux oo la socday markabkaasi yar lala qabtay,lana dhigay xabsiga. Markabkaasi […]
Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya Mudane Maxamed Mursal Sheikh C/raxmaan ayaa maanta kormeer ku sameeyay xafiisyo cusub oo ay yeelanayaan Guddiyada ugu shaqada badan Baarlamaanka Soomaaliyeed. Ujeedka kormeerka Guddoomiyaha Golaha Shacabka uu ku tagay xafiisyada cusub ayaa waxay tahay sidii loo dardar gelin lahaa howlaha Guddiyada Golaha Shacabka ee
Safiirka Soomaaliya ee Midowga Yurub Danjire Cali Saciid Fiqi ayaa warbixin ku saabsan xaaldda tahriibayaasha Soomaaliyeed siiyay Madaxweyaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed C/llaahi Farmaajo. Safiirka oo shalay dalka kusoo celiyay maxaabiis gaaraysa 151 qof ayaa sheegay in xaaladda ay ku suganyihiin tabriibayaasha ay aad u liidato, loona baahanyahay in
Soomaaliya iyo Jabuuti oo kala saxiixday heshiisyo+Sawirro